हातको ओस्टियोआर्थराइटिस | कारण, लक्षण, रोकथाम, व्यायाम, उपचार
हातको ओस्टियोआर्थराइटिस (हात ओस्टियोआर्थराइटिस) | कारण, लक्षण, रोकथाम र उपचार
हातको ओस्टियोआर्थराइटिसको अर्थ हात, औंला र नाडीमा संयुक्त लगाउनु हो। हातको ओस्टियोआर्थराइटिसले दुखाइ, पीडा र कम पकड निम्त्याउन सक्छ - जुन, अन्य चीजहरूको माझ, जाम जारहरू खोल्न वा कफि कप समात्न गाह्रो बनाउन सक्छ। निदान, धेरै जसो केसहरूमा शारीरिक उपचार, दैनिक तान्न र व्यायाम व्यायामद्वारा जाँचमा राख्न सकिन्छ। हामी तपाईंलाई याद दिलाउँदछौं कि लेखमा तपाईका हातहरूका लागि व्यायाम अभ्यासको भिडियो भेट्नुहुनेछ।
सुझावहरू: धेरै जसो मानिसहरुका हात र औंलाहरुमा अस्थिरियामा पीडितहरु यसलाई प्रयोग गर्छन् विशेष रूपले अनुकूलित कम्प्रेसन ग्लोभहरू (यी जस्तो - लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्दछ)।
हात ओस्टियोआर्थराइटिसमा औंलाहरू, नाडी र हातको सानो जोडीमा कार्टिलाज र हड्डीको टिशूको बिरामी हुन्छ। यसले विशेष गरी असर गर्छ:
पहिलो मेटाकार्पल संयुक्त (औंठाको आधार)
फिंगरटिप्स (PIP संयुक्त, औंलाहरु को बाहिरी संयुक्त)
मध्य औंला जोड्ने (DIP संयुक्त, औंलाहरु को बीच को संयुक्त)
यो पनि पढ्नुहोस्: Kneartrose को5चरणहरू
ओस्टियोआर्थराइटिसलाई पाँच चरणमा विभाजन गरिएको छ। माथिको लेखमा यसको बारेमा अधिक पढ्नुहोस्।
अनुसरण गर्नुहोस् र हामीलाई पनि मनपराउनुहोस् हाम्रो फेसबुक पृष्ठ og हाम्रो YouTube च्यानल नि: शुल्क, दैनिक स्वास्थ्य अपडेटहरूको लागि।
लेखमा, हामी समीक्षा गर्नेछौं:
हातमा ओस्टियोआर्थराइटिसको लक्षण
हातमा ओस्टियोआर्थराइटिसको कारण
हात ओस्टियोआर्थराइटिसको विरुद्ध आत्म-उपायहरू
औंलाहरू र हातहरूको अस्थिरियाको रोकथाम
हातमा ओस्टियोआर्थराइटिसको उपचार
यस लेखमा तपाईले हातमा अस्थिरोग र यस क्लिनिकल अवस्थाको कारणहरू, लक्षणहरू, रोकथाम, आत्म-उपाय र उपचारको बारेमा बढी सिक्नुहुनेछ।
के तपाइँ केहि सोचिरहनु भएको छ वा के तपाइँ त्यस्ता पेशेवर रिफिलहरू अधिक चाहानुहुन्छ? हाम्रो फेसबुक पृष्ठमा हामीलाई अनुसरण गर्नुहोस् «Vondt.net - हामी तपाईंको पीडा कम गर्दछौं। वा हाम्रो युट्यूब च्यानल (नयाँ लिंकमा खुल्छ) दैनिक राम्रो सल्लाह र उपयोगी स्वास्थ्य जानकारीको लागि।
लक्षण र पीडा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फरक फरक हुन्छ। केहि मानिसहरु लाई पीडा वा एकल लक्षण बिना नै महत्वपूर्ण अस्थिसराशोथ हुन्छ - जबकि अरूलाई, हल्का ओस्टियोआर्थराइटिसको साथ दुबै दुखाइ र जोड़ दुखाइको अनुभव हुन्छ। लक्षण प्रायः ओस्टियोआर्थराइटिसको अवस्था अनुसार फरक हुन्छ।
अर्थात्, तपाईं ओस्टियोआर्थराइटिसलाई चरण ० (कुनै ओस्टियोआर्थराइटिस वा संयुक्त पोशाक) बाट चरण ((उन्नत, महत्त्वपूर्ण अस्थिसिया र पोशाक) मा विभाजन गर्नुहुन्छ। विभिन्न चरणहरूले कती कूलमा जोर्नीमा टुक्रिएको छ र संयुक्त कत्रो कत्रो छ भन्ने संकेत दिन्छ। तपाईं ओस्टियोआर्थराइटिसको बिभिन्न चरणहरूको बारेमा बढी पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
लक्षण लक्षण र क्लिनिकल संकेतहरू ओस्टियोआर्थराइटिसमा समावेश हुन सक्छ:
भारी नक्कल, मध्य वा बाहिरी औंलाको जोड़हरूमा देखा पर्न सक्छ
प्रभावित जोर्नीहरूको हल्का वा स्पष्ट सूजन
जोर्नीहरु माथि स्थानीय दबाव राहत
कम ग्रिप शक्ति
अधिक गम्भीर रूपमा लगाउँदा तपाईंको औंलाहरूमा चोट पुग्न सक्छ
प्रयोग र लोडको क्रममा हातहरूमा कार्य
फोरआर्म्स र कुहिनोमा क्षतिपूर्ति पीडाको घटनामा वृद्धि
ओस्टियोआर्थराइटिसबाट प्रभावित हातहरूले कुहिनोमा फोरआर्म रोग, काँधमा समस्या र टेन्डोनिटिसको बढ्दो घटना पनि निम्त्याउन सक्छ। यो किनभने हातले उनीहरूले जस्तो गर्नुपर्दैन ठीक हिसाबले क्षतिपूर्ति दिन थाल्छ - र यसले अन्य शारीरिक संरचना र क्षेत्रहरूलाई असर गर्दछ। यसलाई क्षतिपूर्ति बिमारी भनिन्छ। हातको ओस्टियोआर्थराइटिस, गलत लोडिंगको कारणले, घाँटी दुखाइ (तनाव घाँटी सहित) र घाँटी समस्यामा वृद्धि को लागी एक आधार प्रदान गर्न सक्छ।
किन तपाईंको हातहरू अतिरिक्त कडा र बिहान घाँसे छन्?
जब तपाईं सुत्नुहुन्छ वा चुप लाग्नुहुन्छ, तपाईं रक्तक्षेपण र सिनोभियल फ्ल्युडको कम सर्कुलेशन गर्नुहुन्छ जुन तपाईं अघि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्दा यो हो - त्यसैले तपाईं बिहानको सुरुमा कडा हुनुहुन्छ र चुप लागेर बसे पछि। तर, तपाइँलाई थाहा छ, तपाइँसँग यो पहिले हुनुहुन्न - त्यसैले यो एक संकेत हो कि तपाइँको हात गतिशीलता र सामान्य स्वास्थ्यको मामलामा शीर्ष आकारमा छैन। यो बिहान कडा हुन अपेक्षाकृत सामान्य छ, तर तपाईं मांसपेशिहरु र जोड्ने केहि केहि समस्या छ कि संकेत र उपचार गर्न को लागी संकेत गर्न सक्छ।
स्वयं कार्य र हातमा ओस्टियोआर्थराइटिसको रोकथाम
यदि तपाइँ रोकथाम गर्न र तपाइँको हातमा बुढेसकाल प्रक्रियालाई कम गर्न एक सक्रिय दृष्टिकोण लिन चाहानुहुन्छ भने यो बिल्कुल सम्भव छ। हात, फोरआर्म्स र काँधमा मांसपेशिहरूको सुदृढीकरण गरेर, तपाईं जोड्नीहरूलाई राहत दिन सक्नुहुन्छ, साथ साथै सुधारिएको रक्त संचार र रखरखावमा योगदान दिन सक्नुहुन्छ। धेरैले पनि प्रयोग गर्छन् विशेष रूपले अनुकूलित कम्प्रेसन ग्लोभहरू (लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्दछ), अन्य चीजहरूको माझ, हातमा सर्कुलेशन बढाउन। तल तपाईले दुई सिफारिश अभ्यास कार्यक्रमहरू देख्नुहुन्छ - भिडियो ढाँचामा।
भिडियो: Os व्यायामहरू हात ओस्टियोआर्थराइटिसको बिरूद्ध
यहाँ तपाईं सात अभ्यासहरूको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ जुन हामी यस लेखमा पढ्छौं (पढ्नुहोस्: Hand व्यायाम हात ओस्टियोआर्थराइटिसको बिरूद्ध). तपाईं तलको चरण १ देखि in मा अभ्यास कसरी गर्ने विस्तृत विवरण पढ्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं आफ्नो हातले केहि उठाउनुहुन्छ सोच्नुहोस् - शक्ति को बहुमत काँध र माथिल्लो पछाडिबाट आउँछ। तसर्थ, काँधमा राम्रो शक्ति हातहरू स्वस्थ र राम्रो आकारमा राख्न आवश्यक छ। नजिकको मांसपेशीहरूमा दुबै शक्ति अभ्यास गरेर, साथै नियमित व्यायाम अभ्यास गरेर, तपाईं राम्रो रक्त संचार र मांसपेशिको लोच कायम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि तपाईं यी वा यस्तै प्रकारको अभ्यास हप्तामा धेरै पटक गर्नुहोस्।
VIDEO: काँधहरूको लागि इलास्टिकको साथ व्यायाम बल
थप पढ्नुहोस्: - हात ओस्टियोआर्थराइटिसको लागि Ex व्यायाम
थप पढ्नुहोस्: - तनाव घाँटी र कडा घाँटी की मांसपेशीहरूका बारे तपाईलाई के जान्नु पर्छ
यो लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्छ।
ओस्टियोआर्थराइटिसले औंला, हात र नाडीमा क्यालिफिकेसन निम्त्याउँछ
जब औंलाहरु, हात र कलाई को विभिन्न जोड़हरु को बीचमा कार्टिलेज बिच्छेद, मर्मत प्रक्रिया क्षति को लागि प्रयास मा आफ्नो पक्ष मा देखा पर्नेछ। यी प्रक्रियाहरूमा पनि प्रभावित क्षेत्रहरूमा हड्डीको ऊतकहरूको जमाव समावेश गर्दछ - जसले परिणामस्वरूप क्यालिफिकेसन र हड्डीको दौडन निम्त्याउँछ।
त्यस्ता क्यालिफिकेसनहरू एक्स-रेमा देख्न सकिन्छ र तपाईंको ओस्टियोआर्थराइटिस कत्तिको व्यापक छ भन्नको लागि आधार प्रदान गर्दछ। जब त्यहाँ देखिने हुन्छन्, औंलाहरू वा नाडीमा ठूला हड्डीहरू हुन्छन् तब यो स्पष्ट संकेत हो कि पछिल्लो चरणको अपेक्षाकृत उन्नत ओस्टियोआर्थराइटिस छ।
जब हड्डीको क्षेत्र र स्पष्ट क्यालिफिकेसनहरू औंलाहरूको बाहिरी भागमा देखा पर्दछ, यी हुन् - मेडिकल रूपमा बोले - हेबरडनको गोलाहरू भनिन्छ। धेरै मानिसहरू प्रायः उनीहरूको औंलाको जोड़को बाहिरी भागमा (DIP joints) सानो सानो बल हुन्छ र धेरै आश्चर्य हुन्छ कि त्यो के हुन सक्छ। सत्य यो छ कि त्यहाँ गणनाहरू छन्।
यदि यस्तै क्यालिफिकेसनहरू र क्षेत्रहरू बाह्यतम संयुक्त बीच जोइन्टमा देखा पर्दछ भने यसलाई बुचार्डको गाँठहरू भनिन्छ। यदि मध्य लि link्क (PIP लिंक) प्रभावित छ भने यो वर्णन यसरी प्रयोग गरिन्छ।
थप पढ्नुहोस्: - घाँटी र काँधमा स्नायु तनाव कसरी छोड्ने
पीडादायी मांसपेशीहरू? आज समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहोस् र माथिको लेखमा देखाइएको अभ्यासबाट सुरू गर्नुहोस्।
थप पढ्नुहोस्: - कसरी योगले फिब्रोमायालिया र दीर्घकालीन पीडा कम गर्न सक्छ
कारण: तपाईको हातमा ओस्टियोआर्थराइटिस किन हुन्छ?
संयुक्त पोशाक तब हुन्छ जब बोझ शरीरको राहत र मर्मतको क्षमता भन्दा उच्च हुन्छ। आदर्श रूप मा, एक को यस्तो मजबूत स्थिरता मांसपेशिहरु को छ कि तिनीहरूले जोर्नी मा कुनै पनि लगाउन को लागी मुक्त गर्न सक्छ - तर दुर्भाग्यवस यो लगभग असम्भव छ।
यो किनभने सामान्य संयुक्त पोशाक परिवर्तन र ओस्टीओआर्थराइटिस उमेर सँगै बढ्दो हुन्छ - दैनिक जीवनमा सामान्य पोशाक र च्यात्नुको कारण। उमेरका साथ, हामीसँग उपास्थि र जोर्नीहरू मर्मत गर्न पनि कमजोर क्षमता छ। हातमा यो विशेष गरी दोहोरिने तनाव हो जुन संयुक्त पहिरन र ओस्टियोआर्थराइटिसको बहुमतको पछाडि हुन्छ।
यो देखिएको छ कि यी जोखिम कारकहरूले विशेष गरी ओस्टियोआर्थराइटिसको उच्च संभावना दिन्छ:
कि तपाईं एक महिला हुनुहुन्छ
एउटा काम जुन धेरै दोहोरिने तनाव समावेश गर्दछ
ओस्टियोआर्थराइटिसको पारिवारिक इतिहास
आघात वा फुटेको
यसैले, हातमा अस्थिरियाको विकासका लागि सबैभन्दा सामान्य जोखिम कारकहरू पर्याप्त प्रतिस्थापन बिना नै अतिभार, संयुक्त समस्याहरूको पारिवारिक इतिहास र हातमा अघिल्लो चोटहरू समावेश गर्दछन्। यो पनि राम्ररी अभिलेख गरिएको छ कि फ्र्याक्चर र जोर्नीहरूलाई चोट पुर्‍याउने अस्थिरिया र एक द्रुत बुढारी प्रक्रियामा नेतृत्व गर्दछ।
त्यहाँ धेरै उपचारहरू छन् जुन तपाईंलाई राहत र कार्यात्मक सुधार प्रदान गर्दछ। तपाईले आज सुरू गर्नु पर्ने कुरा दैनिक क्षमता र तनाव व्यायाम हो कार्यक्षमता कायम राख्न र रगत परिसंचरण बलियो बनाउन।
संयुक्त गतिशीलता र मांसपेशि कार्य सहित मैन्युअल उपचार, अस्थिरिया र यसको लक्षणहरूमा राम्रोसँग दस्तावेज प्रभाव गर्दछ। शारीरिक उपचार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा गरिनु पर्छ। नर्वेमा यसको अर्थ फिजियोथेरापिस्ट, आधुनिक चिरोप्रेक्टर वा म्यानुअल थेरापिस्ट हो।
धेरै व्यक्तिहरू छक्क पर्दछन् कि अनुसन्धानले मांसपेशीहरू र जोड्नेहरूको यस्तो उपचार वास्तवमा व्यायाम भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर देखाउँदछ (1) जब यो दुखाई कम गर्न र सुधारिएको प्रकार्य प्रदान गर्न आउँदछ। घर व्यायामको संयोजनमा त्यस्तो उपचार कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्छ? आधुनिक काइरोप्रैक्टर्स दुबै मांसपेशिहरु र जोड्ने उपचार गर्दछ, साथै घर व्यायाममा निर्देशन दिंदा तपाईलाई दिगो दिगो स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। यदि तपाईंसँग व्यापक ओस्टियोआर्थराइटिस छ र परम्परागत व्यायामको साथ संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी पनि अत्यधिक सिफारिस गर्न सक्छौं तातो पानी पोखरी मा प्रशिक्षण.
शारीरिक थेराइले लेजर थेरापी र सुई थेरापी पनि समावेश गर्न सक्दछ।
उच्च antioxidant सामग्री को साथ आहार
यो देखिएको छ कि एन्टि-इन्फ्लेमेटरी (एन्टी-इन्फ्लेमेटरी) पोषणात्मक मानहरूको उच्च सामग्री भएको डाइटले जोर्नीहरूको सूजन कम गर्न र अनावश्यक संयुक्त विनाशलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। «Fibromyalgia आहारYou तपाइँ को लागी एक उत्कृष्ट शुरुवात बिन्दु हो जो यस बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - Fibromyalgia डाइटको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा
दैनिक जीवनमा अधिक आन्दोलन
के तपाइँसँग यस्तो रोजगार छ जुन तपाइँलाई धेरै पुनरावृत्ति र स्थिर लोड दिन्छ? त्यसो भए हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाई पर्याप्त आन्दोलन र रक्त परिसंचरण प्राप्त गर्न अतिरिक्त सावधान रहनुहोस्। एउटा प्रशिक्षण समूहमा सामेल हुनुहोस्, साथीसँग हिंड्न जानुहोस् वा घर व्यायाम गर्नुहोस् - सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईंले आफूले मनपराउने काम गर्नुभयो र दैनिक जीवनमा बढी आन्दोलनको लागि आफैलाई प्रेरित गर्न प्रबन्ध गर्नुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: -6ओस्टियोआर्थराइटिसको प्रारम्भिक लक्षण
हातमा ओस्टियोआर्थराइटिसको निदान
अस्टियोआर्थराइटिस प्राय: इतिहास लिने, क्लिनिकल जाँच र इमेजिंग (सामान्यतया एक्स-रे) को संयोजनबाट निदान गरिन्छ। संयुक्त पोशाकको सीमा हेर्नका लागि तपाईले एक्स-रे लिन पर्छ - किनकि यसले हड्डीको टिशूलाई उत्तम तरिकामा देखाउँदछ। यस्तो इमेजि study अध्ययनले क्यालिकेसन र कार्टिलाज क्षति देख्न सक्दछ।
तपाईंलाई आधुनिक क्यारोप्रैक्टर वा चिकित्सकद्वारा एक्स-रे जाँचमा पठाउन सकिन्छ। त्यस्ता इमेजि tests परीक्षण रेडियोग्राफर्स र रेडियोलोजिस्टहरू द्वारा लिनुपर्दछ - र तपाईले सहयोगका लागि परामर्श गरेको व्यक्तिबाट होईन। यदि तपाईंले पछाडि कोठामा एक्सी-रे मेसिन राख्ने क्लिनिशियनलाई देख्नुभयो भने, अरू कतै जानु उत्तम हुन्छ।
यदि तपाईं लक्षणहरूसँग चिन्तित हुनुहुन्छ जुन ओस्टियोआर्थराइटिसको सम्झना दिलाउन सक्छ भने हामी तपाईंलाई सुझाव दिन्छौं कि यसलाई समीक्षाको लागि तपाईंको जीपीमा लैजानुहोस्। ओस्टियोआर्थराइटिसको हदमा पत्ता लगाउँदा तपाईले स्व-उपाय र रोकथामको बारेमा सार्वजनिक रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त क्लिनिकमा के गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट संकेत दिन सक्छ। हामी तपाईंलाई सम्झना गराउँछौं कि व्यायामको साथ संयोजनमा शारीरिक उपचारले लक्षणहरू राहत दिन र तपाईंलाई कार्यशील सुधार प्रदान गर्नमा राम्रो प्रभाव पार्दछ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - महिलामा फिब्रोमाइल्जियाको Sy लक्षण
तपाईं उचित उपायहरू, व्यायाम र कुनै पनि उपचारको साथ ओस्टियोआर्थराइटिसको विकासलाई सुस्त बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी विशेष गरी काँध र हतियारको लागि तालिमको साथ प्रशिक्षण दिन स्वस्थ जोड्ना, सुधारिएको रक्त परिसंचरण र स्वस्थ मांसपेशीहरूमा सिफारिस गर्दछौं।
के तपाइँसँग लेखको बारेमा प्रश्नहरू छन् वा तपाइँलाई अरू कुनै सुझावहरू चाहिएको छ? हाम्रो मार्फत सिधा हामीलाई सोध्नुहोस् फेसबुक पेज वा तल टिप्पणी बक्स मार्फत।
ओस्टियोआर्थराइटिसको बारेमा स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्
पुरानो दुखाई निदानको लागि नयाँ मूल्यांकन र उपचार विधिका विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि सामान्य जनता र स्वास्थ्य पेशेवरहरूको बीचमा ज्ञान हो। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले यस समयलाई सोशल मिडियामा साझेदारी गर्न समय लिनुभयो र तपाईंको मद्दतको लागि अग्रिम धन्यवाद भन्नु होस्। तपाइँको साझेदारी को मतलब प्रभावित को लागी एक महान सम्झौता हो।
थप पोस्ट साझा गर्न माथिको बटन थिच्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
सिफारिश गरिएको स्वयं सहायता
अनुकूलन कम्प्रेसन ग्लोभहरू (लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्दछ)
कम्प्रेसन ग्लोभ्सको दैनिक प्रयोग औंला र हातमा अस्थिरिया र जोर्नीशोथबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि अत्यधिक सान्दर्भिक उपाय हुन सक्छ। धेरैले महसुस गर्दछन् कि कम्प्रेसन ग्लोभजको साथ दैनिक दैनिक कामहरू सजिलो हुन्छन्।
छवि वा लिंक क्लिक गर्नुहोस् नयाँ स्वास्थ्य विन्डोमा तपाईंको स्वास्थ्य स्टोर खोल्नको लागि।
अर्को पृष्ठ: - Kneartrose को5चरण (कसरी बढि Osteoarosis बिगार्छ)
अर्को पृष्ठमा अगाडि बढ्न माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस्। अन्यथा, नि: शुल्क स्वास्थ्य ज्ञानको साथ दैनिक अपडेटहरूको लागि हामीलाई सामाजिक मिडियामा फलो गर्नुहोस्।
हातमा अस्थिरियासम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
हामीलाई तल टिप्पणी अनुभागमा वा हाम्रो सामाजिक मिडिया मार्फत कुनै प्रश्न सोध्न नहिच्किचाउनुहोस्।